6 Responses to လက်ပံတောင်းတောင်သပိတ်စခန်းများ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှုကို ကန့်ကွက်ကြရန် မြန်မာတို့ တိုက်တွန်း
မောင်ပျာလောင် on November 29, 2012 at 12:49 pm
မောင်ပျာလောင် ဒီတခါတော့တကယ်ဘဲ ၀မ်းနည်းတယ်၊ စာပြောင်တွေရေးပြီး ရယ်ရအောင်ကလိခဲ့ပေမဲ့ ဒီတခါတော့ စစ်ခွေးတွေ၊ လုံထိန်းတွေ၊ ကြံ့ဖွတ်တွေကို ကလိခြင်တယ်။ ကလိခြင်တာမှ သံလျှင်မှာ ငဇင်ကာနဲ့နတ်သျှင်နောင်တို့ ကို အနောက်ဖက်လွန်မင်းတရားကြီး တံကျင်လျှိုပြီး ကလိသလို ကလိပြီးကားစဉ်တင်ထားခြင်တယ်။ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြထုတ်ဖော်သူများအပေါ် မြန်မာအစုိုးရ၏ တရားဥပဒေမဲ့ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခြင်းကို ကန့်ကွက် ရှုံ့ချတာ လုံးဝမှန်တယ်၊
aung htoo on November 30, 2012 at 12:35 am
Htwe on November 30, 2012 at 4:46 am
Military – never changed their f…… attitude. Thein Sein and his military have changed whatever they had to show and for their benefits, it did not mean they wanted to change. That is showing they do not change, still cruel and selfish. Thein Sein will not change as still needs to protect himself what he had done in his black history.
bala on November 30, 2012 at 6:43 am
ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်။ တိုင်း၇င်းသားပေါင်းစုံနဲ့ဗမာလူမျိုးတွေသာပိုင်တဲ့ နိုင်ငံတော်တခုသာဖြစ်တယ်။
သာထွန်း on November 30, 2012 at 9:39 am
ဘင်္ဂလီတွေကျတော့ ကိုယ်ရှေ့မှာအကြမ်းဖက်နေတာတောင် မပစ်ရဲဘူး။ကိုယ်ဘာသာဝင်ဘုရား သားတော်တွေ
တရုတ်လေး on December 2, 2012 at 1:52 am
တကယ်ဘဲ ၀မ်းနည်းတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်ဖို့အများကြီးလိုအပ်သေးတယ်။အခုထိ အာဏာကို လက်ကိုင်သုံး နေတုန်းပဲ.။